इक्वेडर सीमा शुल्क | यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | इक्वेडर, मार्गदर्शकहरू
ल्याटिन अमेरिका यो दौडको पग्लने भाँडो हो र यसको हजारौं वर्षको सभ्यता र संस्कृतिले महत्त्वपूर्ण विरासत छोडेको छ। हुनसक्छ, एउटा गैर अमेरिकीका लागि त्यहाँ कुनै भिन्नता वा विचित्रताहरू छैनन् तर आज हामीहरू यसबारे कुरा गर्नुपर्दछ इक्वेडर को सीमा शुल्क।
इक्वेडर, एउटा सानो देश जुन तपाईंलाई थाहा छ अन्य चीजहरूको माझमा, किनकि यहाँ भूमध्यरेखा हो, दुई गोलार्धमा विश्वको विभाजन रेखा, र किनभने महान् विकीलीक्सका मानिस जुलियन असान्जे आफ्नो दूतावासमा शरणार्थी भएकोले पनि वर्षौं लन्डनमा।
2 इक्वेडर सीमा शुल्क
यो दक्षिण अमेरिकाको पश्चिममा छ र प्रशान्त महासागरमा एक किनार रेखा छ। तपाईं यो राख्नुहोस् कोलम्बिया र पेरूको बीच र यसको राजधानी क्विटो शहर हो। यससँग पहाडहरू, एन्डिसहरू छन्, यसमा समुद्री तटहरू छन् र शानदार अमेजन जंगलको अंश पनि।
यसको जनसंख्या मेस्तिजो हो आधाभन्दा बढी, स्पानियर्ड्स र स्वदेशी जनताको सन्ततिहरूको मिश्रणको ठूलो बहुमतमा, यद्यपि दासहरूबाट आएको सानो काली जनसंख्या पनि छ।
इक्वेडर यो गणतन्त्र हो y धेरै भाषाहरू यहाँ बोल्दछन् प्रमुख स्पेनिश भाषा को अतिरिक्त। उदाहरणका लागि, अनुमान गरिएको छ कि २० लाख भन्दा बढी मानिस अमेरिकी भाषाहरू बोल्छन्, जसमा क्वेचुआ र यसका केही भेरियन्टहरू कोफान, टेटेटे वा वाउराणी पनि पर्छन्। यी सबैको साथ तपाईले यो सोच्न सक्नुहुन्न कि इक्वेडर एक सजातीय राष्ट्र हो, यति धेरै भाषा र धेरै मानिसहरू छन्, सत्य यो हो कि त्यहाँ धेरै सांस्कृतिक रीतिथितिहरू छन्।
यसैले इक्वेडर विविध देश हो। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रको यसको विशिष्टता हुन्छ र यो भाषामा तर कपडाहरू, ग्यास्ट्रोनोमी, रीतिथितिमा पनि देखिन्छ। त्यहाँ जम्मा चार राम्रा चिन्ह भएका क्षेत्रहरू छन्: तट, एन्डिज, अमेजन र गलापागोस द्वीपसमूह।
पहिले, म एक महिला हुँ, त्यसैले Machismo को विषय मेरो रुचि हो। इक्वेडर एक माचो देश हो, बलियो क्याथोलिक विरासत र एक पुरुष के गर्छ र महिलाले के गर्छ बिचमा भूमिकाको एक छुट्टै विभाजनको साथ। यद्यपि सबै चीजहरू परिवर्तन हुन्छन् र आजका दिनहरूमा अन्य हावाहरू संसारभरि नै चलिरहेको छ, हामीलाई थाहा छ कि यस परिवर्तनको लागि यसको कति खर्च हुन्छ र यो अपवाद छैन।
सबै ल्याटिनो जस्तै इक्वेडोरहरु शारीरिक सम्पर्क जस्तै, त्यसोभए यदि त्यहाँ नजिक छ भने ह्यान्डशेक वा औपचारिक अभिवादन ब्युनोस डेस र अन्यहरू, आलिंगन वा काँधमा एउटा प्याट। महिलाहरू आफ्नो पक्षका लागि गालामा एक अर्कालाई चुम्बन गर्छिन्। यदि त्यहाँ परिचित छैन भने यो राख्नु ठीक छ महोदय, महोदया वा मिस नाम भन्दा पहिले मात्र साथीहरू वा परिवारको नाम पहिलो नाम द्वारा व्यवहार गरिन्छ।
यदि तपाईंलाई इक्वेडरियनको घरमा आमन्त्रित गरिएको छ भने, मिठो, वाइन वा फूलहरू हुन सक्ने उपहार ल्याउन शिष्ट हुन्छ। यहाँ उपहार तपाईंको अगाडि खोल्न गइरहेको छ, अन्य देशहरूमा जस्तो कि रूखो मानिन्छ। पनि पामतार्थता। हो, तपाईं सहि पढ्नुहुन्छ। ल्याटिनो ओरिएंटलहरू भन्दा बढी आराम पाएका छन्, उदाहरणका लागि, यदि तिनीहरूले तपाईंलाई बेलुका9बजे आमन्त्रित गरे भने उनीहरूले तपाईंलाई साँझ :9: from० बाट अपेक्षा गर्छन्।
टोस्ट पिउन सुरु गर्नु अघि सामान्य चीज हो चिच्याउनुको लागि स्वास्थ्य! सबैले टोस्ट गर्दछ र प्रश्नमा पेयको एक घूंट लिन्छ। खाना धेरै रमाईलो छ र धेरै कुराकानी छ। अन्तीममा, खाना भन्दा अघि र पछिको मद्दतको लागि यो साह्रै नम्र छ। म यसो भनिरहेको छैन कि तपाईं भाँडा माझ्नुभयो तर शायद तपाईं केही गिलासहरू उठाउन सक्नुहुन्छ। यदि यसको सट्टामा साथीहरूको खाना हुनु हो केहि औपचारिक, काम, इक्वेडरियन शिष्टाचार कडा छशैक्षिक डिग्रीहरू प्रयोग गरिन्छ, व्यापार कार्ड आदानप्रदान हुन्छ, पुरुषहरू समेत महिलासँग हात मिलाउँछन्।
ल्याटिनोस सामान्य रूपमा इक्वेडोर मैत्री र न्यानो छ तपाईको व्यक्तिगत सम्बन्धहरुमा तिनीहरू तपाइँसँग कुरा गर्छन् जब तपाइँ बोल्नुहुन्छ, तिनीहरूले तपाइँलाई छुन्छन् र यदि तपाइँले त्यसो गर्नुभयो भने तिनीहरू रिसाउँदैनन्। उनीहरूसँग छ महान गैर मौखिक भाषा र तिनीहरू सबै कुरा सोध्नुबाट वञ्चित गर्दैनन्। यदि तपाईं आरक्षित हुनुहुन्छ भने यसले तपाईंलाई अचम्मित तुल्याउन सक्छ तर यो कुराकानीको कारणले गरिएको छैन किनकि व्यक्ति तपाईंको अधिक गठन छवि चाहन्छ।
इक्वेडरियन पोशाक कसरी छन्? सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ एक अन्तर्राष्ट्रिय फेसन छ र इक्वेडर अर्को ग्रह मा छैन। त्यो भनिएको छ, यो पनि साँचो छ कि प्रत्येक क्षेत्रमा कपडाको शैली छ र ती शैलीहरूले देशको सांस्कृतिक विविधता प्रकट गर्दछ। उदाहरण को लागी, राजधानी क्वीटोमा पुरुषहरू अक्सर निलो पोन्चोस लगाउँछन्, टोपी र शॉर्ट्स आधा। कम्मर मा छ शिम्बा, एक लामो वेणी जसमा पूर्व Inca मूल छ र धेरै परम्परागत छ।
अर्कोतर्फ, महिलाले सेतो ब्लाउज लगाउँदछन् (कहिलेकाँहि खैरो वा खाकी), लामो बाहुलाहरू र कहिलेकाँहि लामो नेक्लाइन। स्कर्ट पेटीकोट बिना नै निलो छ, र हेममा केही सजावटको साथ। रातो कोरल र सुनका ब्रेसलेटहरू र शल थपिएका छन् किनभने सामानहरू महत्त्वपूर्ण छन्। उनीहरूले ब्लाउजमा लगाएको बहु रंगीन लुगाहरू पनि प्रतीकात्मक छ, टोपी र नेकलेसहरू जस्ता। तटीय क्षेत्रमा, पुरुषहरू गुययबेरस र महिलाहरू लाइट पोशाक लगाउँदछन्।
जस्तो कि तपाईंले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ कुनै खास पोशाक छैन यद्यपि एक क्विटोमा बोकेको र माथि वर्णन गरिएको सबैभन्दा नजिकको हो। अर्कोतर्फ, हिमालहरूमा उनीहरूले सुहाउँदो स्कर्ट पनि लगाउँदछन्, चम्किलो रंगमा र कढ़ाई र ऊनी शलको साथ। बदलेमा, अमेजन फेदर हेड्रेसहरू अझै पनी जारी छ र देशका अन्य भागहरूमा, दुर्भाग्यवश, अन्तर्राष्ट्रिय फेसनले विशिष्ट पोशाकलाई बिर्सेको छ जुन केवल पर्यटकहरूको आकर्षण बन्न पुगेको छ।
अन्तमा, दुई मुद्दाहरूलाई रेखांकित गर्न: चाडपर्व र पाक कला। पहिलो समूहमा चाखलाग्दोfछन्Inti रायमी, यामोर र मामा नेग्रा को ग्रीष्मकाल। पहिलो सूर्यमा समर्पित त्यो चाड हो जुन जुनमा जाडोमा संक्रान्ति मनाउँदछ। यामोर सेप्टेम्बरको शुरुमा ओटाभालोमा मनाइन्छ र मामा नेग्रा मूर्तिपूजक उत्सव हो जुन नोभेम्बरमा लिन्छ।
भान्छाको बारेमा दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाना खाजा हो y प्रत्येक क्षेत्रमा यसको पेट्रोनी हुन्छ। माछा, शंख र उष्णकटिबंधीय फल जस्तै केरा तटीय क्षेत्रमा केन्द्रित छन् र पहाडमा भात र मासु। तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ सिभिस, सुक्खा बाख्रा (एक स्ट्यु), अर्को सूप भनिन्छ फनेस्का सिमी, दाल र मकैको साथ प्याज संग माछा सूप तटीय वा पेटाकोन्स, भुटेको केरा।
आश्चर्य बिना इक्वेडर को यात्रा गर्न।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » इक्वेडर » इक्वेडर सीमा शुल्क